सुस्ताका स्थानीयबासीको आँट : डुबानमा परेपछि बाँध भत्काए – Yuvajagaran Nepal's Online Newspaper
सुस्ताका स्थानीयबासीको आँट : डुबानमा परेपछि बाँध भत्काए
काठमाडौं, असार २० गते । पश्चिम गण्डक नहरमा वर्षामा पानीको निकास नभएका कारण डुब्दै गएको लक्ष्मीपुर बाँध गुदरियाका स्थानीयले भत्काई दिएका छन् ।
सुस्ता गाउँपालिका वडा नं. २ गुदरियाका स्थानीयले नहरका कारण लक्ष्मीपुरमा लगाएको दुई सय बढी बिगाहा धानबाली डुबानमा परेपछि सुस्ता गाउँपालिका–२ गुदरियाका स्थानीयले नहर फुटाएका हुन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।
पानी निकासका लागि बनाइएका साइफनमर्मत र सफाई नगर्दा धानबाली डुबानमा परेको थियो। खेतलाई डुबान गरेको पानी स्थानीयले उत्तरतर्फको गण्डक नहरमा छाडिदिएका छन्। गतवर्ष समेत नहका कारण डुबानमा परेको भन्दै रुपौलियाका स्थानीयले बाँध फुटाएका थिए। हरेक वर्ष साइफन मर्मत तथा सफा गर्ने जनाए पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्ने गरेको छ।
नहर फुटाएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र गण्डक सिंचाई व्यवस्थापन डिभिजन समेरिका प्राविधिसहितको टोलीले निरीक्षण गरेको छ। डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर टीकाराम बरालले नहर फुटाएको बारे भारतीय पक्षलाई जानकारी गराइसकेका छन्।
‘हामीले नहर फुटाएको बारे भारतीय सिंचाई कार्यालयका इन्जिनियरलाई जानकारी गराएका छौं, आन्तरिक छलफल गरेर समस्या समाधानका लागि आउने सुझाव पाएका छौँ’, बरालले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले भारतीय पक्षले खेतको पानी निकासका लागि राखेको ह्युम पाइप नहर भन्दामाथि भएकाले निकास हुन नसक्दा डुबान भएको बताए। तत्काल समस्या समाधानका लागि स्थानीयले पानीको निकास मात्र गरेको भन्दै उनले यो समस्या समाधान चाँडै हुने विश्वास व्यक्त गरे।
बाढी र पहिरोमा परी तेइस जनाको निधन
पृथ्वीनारायण शाह अंकित सिक्का
राजपत्रमा प्रकाशित भईसकेको नियमावली किन संसद बैठकबाटै च्यातियो ?
२ सय ९७ औं राष्ट्रिय एकता दिवसको सान्दर्भिकता
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद अधिवेशन सम्बोधन स¥र्यो